Iraka natao tany Toamasina | Primature
Iraka natao tany Toamasina
Mahazoarivo, ny 26 martsa 2020 – Nanatanteraka iraka avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, tany Toamasina, ny Praiminisitra Ntsay Christian androany maraina, hijery ny fampiharana ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana hifehezana ny tsy hiparitahan’ny valanaretina “coronavirus”, sy ny fihodinan’ny « centre opérationnel de commandement COVID-19 » natsangana any an-toerana, ary ireo zavatra tsy ampy na ny mety ho olana ateraky ny fiatrehana izao tranga manokana eto amin’ny firenena izao. Namory ireo tompon’andraikitra rehetra tany an-toerana ny tenany, nanome toromarika, ary notronin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena izy nandritra izany.
Nitondra fanazavana momba ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fanjakana nirosoana tamin’ny « Etat d’urgence sanitaire » ny Praiminisitra ka nanao antso avo tamin’ny vahoakan’i Toamasina mba hanaraka amin’ny antsakany sy andavany ny toromarika omen’ny tompon’andraikitra any an-toerana hanajàna ireo fepetra napetraka, indrindra momba ny fihibohana (confinement): « mila manao ezaka isika ao anatin’ny 14 andro izay nandraisantsika fanapahan-kevitra », hoy ny Praiminisitra. Tafiditra ao anatin’izany fepetra izany ny tsy fahafahan’ireo fitaovam-pitaterana rehetra mandeha intsony, ankoatra ny mpitatitra entana hamatsiana ny filan’ny mponina amin’ny fiainana an-tanàna ; eo ihany koa ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina, afa-tsy ho an’ireo miatrika filàna vonjy maika na tranga tsy azo anoharana, toy ny mitondra marary, sy ny sisa.
Efa miasa any an-toerana ny « centre opérationnel de commandement COVID-19 » anivon’ny Faritra, ka niarahaba manokana an’ireo tompon’andraikitra mitantana izany ivon-toerana izany ny Praiminisitra, ary rehefa nahazo tatitra momba ny zava-misy dia nandroso fanitsiana vitsivitsy momba ny fampihodinana azy, ohatra amin’izany ny eo amin’ny lafiny ara-bola, mba hahafahan’ny ivon-toerana manatanteraka feno ny asany amin’ny fibaikoana sy fandrindrana ny asa rehetra avy ao Toamasina.
Araka ny fanapahan-kevitra dia ny « CHU » Morafeno no natokana handraisana ireo marary raha sanatria ka misy olona hita ho mitondra ny tsimok’aretina, efa vonona tanteraka amin’izany ireo mpiasan’ny fahasalamana.
Niteraka olana ho an’ireo mpitatitra amin’ny “tuc tuc” sy “pousse pousse” ny tsy fahafahana manao fitateram-bahoaka mandritra ny fe-potoana ampiharana ny fepetra hiadiana amin’ny COVID-19 ka nanao fitokonana nanehoana ny fitarainany momba ny fivelomany izy ireo. Araka izany dia nifampidinika tamin’ny solon-tena avy amin’ireto mpitatitra ireto ny Lehiben’ny governemanta sy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ka nitondra vahaolana tamin’ny anaran’ny fitondram-panjakana, ary dia niravina ny savorovoro niseho. Nambaran’ny Praiminisitra nandritra izao fidinana izao ihany koa fa hojerena ny fomba tsy hahavery asa an’ireo mpisehatra eo anivon’ny toekarena manara-drafitra (économie formelle).
Akon’ny dian’ny Praiminisitra tao Nosy Be sy Mahajanga →
Visite du Premier ministre à Antsiranana
Fidinana tany Anjozorobe
Fanomanana ny fandraisana ny Papa ary famoahana mpanamory angidimby